‘राजनीतिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म सुधारको आशा गर्न सकिन्न’
अन्तर्वार्ता/विचारशनिबार, १२ फाल्गुण , २०७४
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) को पछिल्लो विश्वव्यापी भ्रष्टाचार सूचकांकमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपाल नौ स्थान माथि उक्लिएको छ । टीआई नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “राजनीतिक तहमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएसम्म समग्र सुधारको आशा गर्न सकिन्न।”
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो सूचकांक अनुसार, भ्रष्टाचारमा कमी आएकै हो त ?
सूचकांकमा नेपाल अहिले कुल १०० मा ३१ अंक पाएर १२२औं स्थानमा छ । अघिल्लो वर्ष १३१औं स्थानमा थियो । १०० मा जति अंक बढी पायो, भ्रष्टाचारमा उति नै सुधार र जति कम पायो, उति नै खराब अवस्था मानिन्छ । अहिले पनि नेपाल ‘अति भ्रष्टाचार’ हुने मुलुकमै पर्छ ।
तर, भ्रष्टाचार मापन गर्ने आधारमध्येको राजनीतिक भ्रष्टाचारमा नेपालले केही सुधार गरेको छ । त्यसैले सूचकांकमा केही स्थान माथि देखिएको हो ।
यसो हुनुको कारण के हो ?
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तह र सातै प्रदेशमा निर्वाचन सकिएको छ । नयाँ सरकार बनेको छ । यसले मुलुकमा स्थिरताको संकेत गर्छ । मुख्य कारण यही हो ।
छिमेकी देशहरूमा भ्रष्टाचार क्रमशः नियन्त्रणमा आउनुको कारण के हुनसक्छ ?
सूचकांकमा अघिल्लो वर्ष भारत र चीन क्रमशः ४०–४०अंक पाएका थिए । यो वर्षको सूचकांकमा भारतले ४० र चीनले ४१ अंक पाएका छन् । चीनमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था भएकाले अवस्था थोरै मात्र सुध्रिएको छ ।
नेपालको समस्या चाहिं के हो ?
नेपालमा भ्रष्टाचारको मुहान नै राजनीति हो । राजनीतिक दलले नै भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरिरहेका छन् । दलहरूभित्र सुशासन नै छैन । भ्रष्ट राजनीतिक प्रणालीकै कारण नेपालमा प्रणालीले काम गर्न नसकेको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्था पनि बनेका छन् । तर, पनि भ्रष्टाचार नघट्नुको कारण के हो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टलाई कारबाही गर्छ भन्ने सोच्नु दिवास्वप्न भइसकेको छ । जनतालाई निराश बनाउन अख्तियारकै पृष्ठभूमिले काम गरेको हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको रेखदेखमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । अहिलेका लागि अर्को विकल्प देखिन्न ।